Micro Studio BM-800 Opinion | Waxaan ka socdaa mac
Micro Studio BM-800, fudud, jaban oo aad u xiiso badan in la bilaabo
Jordi Gimenez | | Gargaarka, dhowr
Waxaan bilaabayaa qoraalkan anigoo sharxaya inay ku saabsan tahay inaan arko faa iidooyinka iyo tayada uu mikiyaamkan qiimaha jaban ee runta ahi ina siinayo. Haddii aad ka mid tahay isticmaaleyaasha doonaya inay bilaabaan duubista Podcast, howlaha duubista fudud iyo wixii la mid ah micro-kan yar ee BM-800 wuxuu noqon karaa ikhtiyaar aad u wanaagsan. Haddii, dhinaca kale, aad tahay isticmaale dalbanaya oo raba makarafoon xoogaa xirfadlayaal ah oo leh xulashooyin badan sida xakamaynta guulaha iyo kuwa kale, makarafoonkan adiga kuguma xirna.
Hagaag, waxaan bilaabayaa anigoo u sheegaya khibradeyda gaarka ah mic-da oo runtuna waxay tahay inaanan ku faraxsanaan karin tayada maqalka ee la gaaro inkasta oo run ahaantii ay fudud tahay. Si ka duwan noocyo kale oo badan oo micro ah oo aan ku haysanno suuqa, kan ayaa loogu talagalay kuwa doonaya ku bilow duubista oo ugu yaraan ku bixi. Waxaan mar hore idiin sheegayaa in dhamaadka kuwa jecel duubista ay ku dhamaanayaan xulashada noocyada kale ee mics si ay u sameeyaan duubitaanadooda iyo xitaa inay doortaan miis isku dhafan si loo hagaajiyo tayada maqalka illaa ugu badnaan. Laakiin kuwa doonaya inay bilaabaan ama kaliya duubaan maqalka waqti ka waqti uma baahna inay lacag ku qaataan.
Tan labaad waa kiiskeyga oo dhowr bilood kadib duubitaan a Podcast toddobaadle ah Aniga iyo asxaabteyda Nacho Cuesta iyo Luis Padilla halkaasoo aan uga wada hadalnay Apple waxyaabaha kale, waxaan go'aansaday inaan doorto makarafoon laakiin nolosheyda kama tagin. Markii hore waxaan ku duubay duubista boodhadhka leh sameecadaha ay Apple ku bixiso iPhone-ka, EarPods iyo in kasta oo ay run tahay inay i siiyeen tayo wanaagsan oo guud ahaan wanaagsan waxaan doonayay inaan tallaabo dheeraad ah qaado haddana waxaan isticmaalaa mid ka mid ah kuwan Uni-jiho mics leh XLR isku xira dhinaca makarafoonka iyo 3,5 jack dhinaca kale si loogu xiro Mac.
Si aad u isticmaasho makarafoonka noocan ah had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad haysato kaarka maqalka ee dibada oo leh isku xira USB ama wixii lamid ah (laakiin qasab ma ahan hadii ay tahay Uni-jiho sida BM-800) iyo kiiskeyga sidaan horeyba ugu sharaxay tan. boostada sida loo duubo codka Mac, Waxaan isticmaalaa kaar duug ah oo ah dhagaha dhagaha ee Steelseries Siberia kaas oo i siiya makarafoon iyo gelinta taleefanka si madaxbanaan. Laakiin haddii aadan haysan kaar oo aad xiisaynayso makarafoonkan, ha ka welwelin, tani waa waxa ay ku leedahay wikipedia ee ku saabsan noocan micro-ka ah:
Mikirifoonnada aan tooska ahayn ama aan tooska ahayn waa makarafoonnadaas oo aad ugu nugul hal jiho oo ay isku mid yihiin dhagoole inta kale.
Tan macnaheedu waxa weeye marka laga hadlayo BM-800 wax dhibaato ah kuma lahaan doono haddii aanan haysan kaarka maqalka ee dibadda ama miiska wax lagu qaso, maxaa yeelay waxay qabaneysaa oo keliya codkeenna ama codkeenna oo ka imaanaya xagal cayiman. Maaha inaan khabiir ku ahay arrinta laakiin aan raadinayo xadgudub Waxaan helay omnidirectionals ama sidoo kale loogu yeero jiheyn la'aan, xasaasiyadooda kuma kala duwanaanta iyadoo loo eegayo kala duwanaanshaha xagallada saameynta mowjadaha dhawaaqa iyo kuwa hiigsanaya kuwaas oo ah makarafoono laba jiho leh, sidaas darteedna xasaasiyad sare u leh jihooyinka ka soo horjeeda. Cafiya kuwa fahmay mawduuca.
Noocyada BM-800 iyo Qiimaha
Waqtigan xaadirka ah, waxaan kaliya ka tagi karaa qeexida makarafoonka waxaanan kugula talin karaa iibsashada haddii aad ku bilaabaneyso duubitaan fudud ama aadan rabin inaad nasiib uga tagto iibsashada makarafoon. Kuwani waa qeexitaannada Micro Studio BM-800:
Soo noqnoqoshada jawaab celinta 20Hz-20KHz
Dareenka: 45 dB ± 1 dB
Miisaanka Badeecada: 0.350 kg
XLR isku xira cable iyo 3,5 jack
La jaan qaadi kara: Linux, Windows 2000, Windows 7, Windows XP, Windows 98, Windows Vista, Windows 98SE, Mac OS, Windows ME
Haddii ka dib markaad aragto dhammaan qeexitaannada iyo faa'iidooyinka makarafoonkan fudud ee xiisaha leh aad diyaar u tahay inaad iibsato, Kaliya waxay kugu kici doontaa qiyaastii 15 euro si aad u beddesho waxaadna ka heli kartaa halka aad ka heli doonto midabbo kala duwan marka lagu daro: caddaan, madow, buluug iyo casaan. Sida iska cad maahan makarafoon leh astaamo xirfad leh oo aan uga iibsan karno istuduwaha duubista xirfadleyda ah, laakiin shaki la'aan qiimahiisa oo hooseeya iyo wax kabadan shaqadiisa wanaagsan, waa wax weyn in la bilaabo duubista.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Micro Studio BM-800, fudud, jaban oo aad u xiiso badan in la bilaabo
Waxaan ku xirey pc-ga microphone-ka waxaan maqlaa shanqar badan oo asalka ah markaan wax duubayo, maxaad kugula talineysaa?
Jawaab Sergio F
sidaas oo kale ayaa igu dhacda
Si aad uga faa’iideysato makarafoonkan waa 100% lama huraan in la iibsado sanduuqa awoodda Phantom
Jawaab Robert Puig
Dhibaatada waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay booska microka waxyaabo kale. Xaaladdayda, waxa dhibaatada ka fogaanaya waa kaarka codka USB ee aan haysto, laakiin sidoo kale isku dayaya inaan hoos u dhigo mugga soo gelinta ee goobaha ayaa wax yar caawin kara. Miyaad hoos u dhigtaa sida sawirka sanduuqa ku yaal?
maya, anigoo gacanta ku haya oo kor ka hadlaya, laakiin kaalay, adigoo aamusan waxay qortay buuq xagga dambe ah
Dhibaatada ka jirta makarafoonadan raqiiska ah ayaa ah inaadan hagaajin karin faa'iidada isla. Daawadu waxay noqon kartaa in la helo barnaamij nadiifiya dhawaaqa, laakiin haddii ay badan yihiin way adkaan doontaa.
Waxaan eegi doonaa si aan u arko haddii aan heli karo wax naga caawiya taas.
Hagaag, waxay sameeyaan ikhtiyaarrada codka Waxaan kiciyey yareynta buuqa xulashooyinka makarafoonka, waxayna umuuqataa in buuqii oo dhan la raray, laakiin hadda wuxuu u muuqdaa mid daciif ah oo halis ah
Dhibaatooyinkan waxay ku hayaan sawaxanka dibedda, illaa codku aad u daciifo. Waxaa kaliya sabab u ah hal qodob, oo aan waligood lagu sheegin qodobka. Taasina waa in makarafoonkani u baahan yahay adeegsiga ilo koronto oo 48v ah.
Ka jawaab calaamadaha
Waad salaaman tihiin asxaabta, waad ku mahadsan tihiin boostada horay.
Kaliya waxaan u soo iibsaday makarafoonkan si aan ugu duubo maqalkeyga Macbook Pro, laakiin si cad uma wada cadeynin dejinta ay tahay inaan abuuro ama qalabka aan u baahanahay inaan si sax ah uga shaqeeyo. Waqtigan xaadirka ah, waan ogahay in si fudud ugu xirashada qalabka dhageysiga ma shaqeynayo ama u aqoonsaneyso inay tahay maqal dibadeed oo ku jira xulashada Sound
Waxaan ka aqriyay adabtarada (iRig PRE), in kastoo aanan garanayn inay xal tahay iyo in kale.
Haddii qofna wax ka ogaado, waan jeclaan lahaa wixii caawimaad ah.
Dhamaan waad salaaman tihiin,
Waa salaaman tahay @toni, isku dhibaato ayaan qabaa. Sida iska cad waxaan la'yahay awood aan ku socdo. Waxaan ku xirey dekedda Jack wax war ahna kama bixinayo jiritaankeeda. Sidee u xalisay? Mahadsanid!
Jawaab Irina Sternik
Hal su'aal ayaan iibsaday makarafoonkan laakiin wuxuu leeyahay XLR aad dhif u ah oo ah USB jack maxaa yeelay dhanka XLR halkii uu kaheli lahaa seddex biin wuxuu keenayaa 4. Waxay isticmaashaa baytari gudaha ah sida aniga ila ah waxay ku xirnaan kartaa makiinad leh awood Phantom laakiin halkee lagu samee Waxaan kuhelaa fiilada XLR sidan ah? 4 biin.?. Ma jiraa qof macluumaad ka haya soosaaraha?
Jawaab Joe Barzz
Waxay ii sheegaan in miciyiintani ay gubaan konsollo iyo kaararka codka. Waa run?
Waan ogahay in boostadu duug tahay, laakiin waxaan qabaa su’aal, ma la jaan qaadi kartaa Windows 8?
Wadahadalka Apple TV Tech ee loogu talagalay horumariyeyaashu waxay noqon doonaan Diseembar
Dadka isticmaala beta beta hadda waxay leeyihiin OS X 10.11.2 beta 3 oo la heli karo